Oo xeebaha Best Yurub Accessible By Tareenadu | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Oo xeebaha Best Yurub Accessible By Tareenadu
ciidaha badan oo xeebta ku bilaabaan inay walaac duulimaad, basaska, iyo huuriyada, laakiin waxaa jira hab fudud. Ku safrid tareen ayaa aad u badan dheefaha, aad ka tago dareen dabacsan ka hor inta aad xitaa bilaabay in aad fasax. Haddii aad raadineyso weeyna ah cuntada delicious iyada oo leh muuqaal badda ama fasax ah qaboowga qoyska, waxaa jira nasasho xeebaha Yurub qurux badan loo heli karo by tareenada.
ITALY: Bay ee aamusnaanta, Sestri Levante
tareenka ugu dhow: Sestri Levante Station, 1.1km, a 14 min iska socdaan.
xeebaha heli karo by tareenada iyo badda iyo midabo fiican
The soo jiidasho Magaalada xeebta ah ee Talyaani Sestri Levante waa mid ka mid ah xeebaha ee la heli karo by tareenada iyo ayaa muddo dheer u dabaal ay Bbc breathtaking iyo guryaha xeebta midabo iyo jiga, oo dhan hodan ku ah taariikhda iyo dhaqanka. Oo beachgoers – aad tahay in nasiib. xeebta yar magacaabay Baia del silenzio, ama 'Bay ee aamusnaanta' helo ay wadata magac ka deji ah, crystal biyaha buluuga ah ee gacanka, iyo sidoo kale qaababka dhagaxa weyn dabiiciga ah in ay ilaaliyaan xeebta dabaysha.
Si looga fogaado dadkii badnaa, lahaa waxaan soo jeedinaynaa in booqashada geeska this Jannada lagu jiro September ama October. Tani waa ka dib markii July iyo August fasax-dejiyeyaasha ka dhigay jidka gurigooda.
Milan in ay Tareenadu Sestri Levante
La Spezia in Tareenadu Sestri Levante
Tareenadu si Genoa Sestri Levante
Parma in ay Tareenadu Sestri Levante
Xeebaha geli karaan tareenada SPAIN: Xilbaa de la Llosa, Cambrils
tareenka ugu dhow: saldhigga tareen Cambrils, kaliya 1,2km ama 16 min laga tareenka ku socda.
3 kala duwan ee badda ku jira
Si ka duwan xeebaha more caanka Isbaanish of Ibiza iyo Mallorca, Platja de la Llosa waa xeebta xasilloon xeebta magaalada xeebta yar oo Cambrils. Ku fiican qoysaska ama lammaanaha raadinaya fasax nasasho. Xilbaa de la Llosa badan ee maqaayadaha iyo kafateeriyada dhow, iyo sidoo kale dalladaha iyo loungers kiro, musqulaha dadweynaha, iyo helitaanka kursiga curyaamiinta.
xeebta laftiisa ayaa durdurradiisa nin-dhigay yar in la xaddido hirarka iyo baddu. Marka lagu daro biyo diiran buluug cad, tani waxay ka dhigtaa dabaasha iyo snorkeling aad u dabacsan.
tareenka ugu dhow: saldhigga tareen Meia Praia, a 6 daqiiqadii, 500m socdaan.
xagaaga oo dadka oo xeebta, ee xeebta ah la heli karo by tareenada
Ku yaal caan ah Algarve xeebaha, Praia Meia waa weyn ee gobolka Lagos iyo sidoo kale xeebaha our ugu weyn ee la heli karo by tareenada. Marka la barbar dhigo kale, qaybo badan oo dalxiis ka buuxo oo Algarve ah, Meia Praia waa abaabulan afar kiiloomitir-dheer oo ciid oo dahab qurux badan iyo is dajiyaan. Waxaa sidoo kale jira makhaayadaha iyo baararka lixdii bilood xeebaha. geesta galbeed ee xeebta waa wax yar ka soocay kuwii ay sabab u tahay u dhawaanshaha Lagos.
Meia Praia Sidoo kale waa xarunta caan ah oo biyo isboortiga oo ay ku jiraan windsurfing, galida faragooysta, iyo barafka jet. Visitors bixin kartaa casharada iyo kiraystaan ​​qalabka. Waayo, yar adventurous, maquufin ah ee biyaha refreshingly qabow iyo a been-down on lounger ka yar dalad, sidoo kale diyaar u ah kirada.
qaado Our ugu danbeysay ee xeebaha heli karo by tareenada, FRANCE: Beach Senix, Guethary
tareenka ugu dhow: Gare de Guethary kaliya 2.1km iska, si fudud u lugeyn karo laakiin waxaad qaadan kartaa masaafo taxi deg deg ah oo ay badda u.
surfer fiirinaya badda
yaryar A, xeebta muuqdo on duurka, unspoiled xeebaha South-Western of France, Beach Senix (sidoo kale mararka qaarkood loo yaqaan Cenitz) waa meel ugu fiican ee surfers bilaabayso, qoysas, ama safra Solo. In wadnaha ee dalka Faransiiska Basque, dhexeeya Biarritz iyo Saint-Jean-de-Luz, Guethary duq ah oo soo jiidasho magaalada kalluumaysiga.
Waxay ku taallaa at koonfureed ee dhamaado Guethary waana sababta ay tahay qayb ka mid ah xeebaha our heli karo by tareenada, hirarka at Plage de Senix waa wax yar yar oo aad ka heli lahaa ilaa xeebta ee Biarritz, oo loo yaqaan caasimadda galida Yurub. quruxda dabiiciga ah iyo vibe dabacsan dhigo mid ku meel kaamil ah si ay u booqdaan.
Bordeaux inay Tareenadu Biarritz
Lyon ilaa tikidhada Tareenka Biarritz
Marseilles in Tareenadu Biarritz
Ma waxaad doonaysaa in la iibsado tigidhada tareenka aad safar xeebaha heli karo by tareenada oo aan ajuurada jaale? Booqasho Saveatrain si ay u helaan heerka ugu jaban.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-european-beaches-accessible-by-trains%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / NL in ay / fr ama / iyo luuqado badan.
longtrainjourneys tareen safarka safarka travelfrance travelportugal travelspain
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareenka Safarka ee Hungary, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Luxembourg, Tareenka Safarka Switzerland, Tareen Travel The Netherlands, safarka Europe
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka ee Britain, Tareen safarka Shiinaha, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe